SARUDZA MUTAURO Afrikaans Akha Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiManipuri (Chinonyorwa Nearufabheti Yedu) ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTamil (Chinonyorwa Nearufabheti Yedu) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Cibemba Cinyanja Corsican Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hawai’i Pidgin Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Jamaican Creole Japanese Javanese Kabardin-Cherkess Kabiye Kabuverdianu Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khasi Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manipuri Mapudungun Marathi Marshallese Martiniquan Creole Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Nicobarese Norwegian Nyaneka Odia Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Pomeranian Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Réunion Creole Saint Lucian Creole Samoan Sango Saramaccan Scottish Gaelic Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Zvimwe unoziva kuti Bhaibheri rinotaura kuti nyika ichaguma. (1 Johani 2:17) Rinenge richireva kuparara kwevanhu vese here? Nyika nezvese zvinorarama pairi zvichaparadzwa here?
MHINDURO YEBHAIBHERI KUMIBVUNZO MIVIRI IYI NDEYEKUTI AIWA!
Chii Chisiri Kuzoguma?
Zvinotaurwa neBhaibheri: Mwari ‘haana kungosikira nyika pasina, asi akaiumba kuti igarwe.’—ISAYA 45:18.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Chimwe chizvarwa chinoenda, uye chimwe chizvarwa chinouya, asi nyika inoramba iripo nekusingaperi.”—MUPARIDZI 1:4.
ZVAZVINOREVA: Bhaibheri rinodzidzisa kuti nyika haifi yakaparadzwa uye vanhu vacharamba vachigara pairi. Saka rinenge richirevei parinoti nyika ichaguma?
FUNGA IZVI: Bhaibheri rinofananidza kuguma kuchaita nyika ino nezvakaitika mumazuva aNoa. Panguva iyoyo ‘nyika yakanga yazara nekurwisana.’ (Genesisi 6:13) Asi Noa aiva munhu akarurama. Saka Mwari akamuchengetedza nemhuri yake, asi akaparadza vanhu vakaipa achishandisa mafashamo. Bhaibheri richitaura zvakaitika rinoti: “Nyika yepanguva iyoyo yakaparadzwa payakafukidzwa nemvura.” (2 Petro 3:6) Uku ndiko kwaitova kuguma kwenyika panguva iyoyo. Asi chii chakaparadzwa? Haisi nyika chaiyo asi vanhu vakaipa vaiva panyika. Saka Bhaibheri parinotaura nezvekuguma kwenyika rinenge risingarevi kuparadzwa kwenyika chaiyo chaiyo. Asi rinenge richireva kuparadzwa kwevanhu vakaipa nemasangano avo.
ZVINHU ZVESE ZVAKAIPA
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Kwangosara nguva diki, uye vakaipa havazovipozve; uchatarisa pavaiva, asi vanenge vasisipo. Asi vanyoro vachagara nhaka yenyika, uye vachafara zvikuru vaine rugare rwakawanda.”—PISAREMA 37:10, 11.
ZVAZVINOREVA: Mafashamo emunguva yaNoa haana kutsvaira zvachose zvinhu zvakaipa zvaiva panyika. Pakapera Mafashamo, vanhu vakaipa vakatangazve kuita zvinhu zvaiita kuti vamwe vanhu vatambure. Asi Mwari ava pedyo kubvisa zvinhu zvese zvakaipa. Ndizvo zvairehwa nemunyori wepisarema paakati: “Vakaipa havazovipozve.” Mwari achabvisa zvinhu zvese zvakaipa achishandisa Umambo hwake. Umambo hwaMwari ihurumende iri kudenga ichatonga vanhu vakarurama vanenge vari panyika.
FUNGA IZVI: Vatungamiriri venyika vachatsigira here Umambo hwaMwari? Bhaibheri rinoratidza kuti havasi kuzohutsigira. Vachatopikisa Umambo hwaMwari. (Pisarema 2:2) Zvichaguma nei? Umambo hwaMwari huchaparadza hurumende dzese dziri panyika, uye “ndihwo hwega hucharamba huripo nekusingaperi.” (Dhanieri 2:44) Asi nei hurumende idzi dzichifanira kuparadzwa?
ZVATINODA—Kubviswa Kweutongi Hwevanhu
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Hazvisi kumunhu ari kufamba kuti aruramise nhanho dzake.”—JEREMIYA 10:23.
ZVAZVINOREVA: Vanhu havana kusikirwa kuti vazvitonge. Havakwanisi kutonga vamwe vanhu kana kugadzirisa matambudziko avo.
FUNGA IZVI: Rimwe bhuku rinonzi Britannica Academic rinoti, zvinoita sekuti hurumende hadzisi kukwanisa “kupedza matambudziko akadai seurombo, nzara, zvirwere, njodzi dzinongoitika dzega, hondo, kurwisana nezvimwewo.” Rinoenderera mberi richiti: “Vamwe . . . vanofunga kuti kana hurumende dzese panyika dzikabatana, pova nehurumende imwe chete, hurumende iyoyo inogona kugadzirisa matambudziko aya.” Asi kunyange hurumende dzese dzikabatana, nyika inenge ichiri kungotongwa nevanhu vane chivi vasingakwanisi kugadzirisa matambudziko ataurwa. Umambo hwaMwari chete, ndiyo hurumende ichakwanisa kugadzirisa zvachose matambudziko ari kusangana nevanhu.
Taona zvinorehwa neBhaibheri parinotaura nezvekuguma kwenyika. Saka vanhu vakanaka havafaniri kutya. Vanotofanira kufara nekuti nyika ino yaora, ichatsiviwa nenyika itsva yakanaka yaMwari!
Zvinhu izvi zvichaitika riini? Nyaya inotevera icharatidza kuti Bhaibheri rinoti kudii.
Zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kukushamisa.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nyika Ino Ichaguma Here?
wp21 nha. 2 pp. 4-6